August | 2008 | The World of Pinkgold
Posted on August 30, 2008 by cuttiepinkgold
Blog Seminar လုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီး စုပေါင်းကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို မြန်မာ ဘလောဂ့်ဂါတွေ စုပေါင်းရေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ စီမီနာ မလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် Blog Day အမှတ်တရ ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်မှာ တင်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
လေ့လာရင့်ကျက် တို့ဘလော့ဂါတွေရဲ့ လက်တွေ..
မနှစ်က ဒီလိုအချိန်ကို ငါပြန်မြင်မိ…။
လူချင်းမနီးပေးမယ့် နှလုံးသားချင်း နီးနေခဲ့ကြတယ်။
ငါတို့ဟာ Blogger များ ဖြစ်တယ်။
ပညာ သုတ ရသ စုံစွာ
ခေါင်းမော့ရင်ကော့ (ငါတို့တွေ) ဆက်ဘလော့မယ်။
တစ်ချို့က.. အပြစ်ဖွဲ့ဖို့ ဘလော့
Global ခေတ်ကို အမှီပြုရင်း
ဘလော့ဂါ ဘာလဲ ဘယ်လဲ။
အမျိုးမျိုးသော အတွေးတွေကို ပေါင်းစုလိုက်တော့
တို့ .. တွေက ဘလော့ဂါတွေပဲ
ဘလော့ဂါ .. ဒီမြစ်တစ်စင်း
ဘလော့တခုပိုင်ရုံနဲ့ ဘလော့ဂါလို့ ပြောချင်လဲ ပြောပေါ့…
အနုပညာဆိုတာ ဖန်တီးသူရဲ့ နှလုံးသွေးစုတ်ချက် …..
ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းဆိုတာ ဖန်တီးသူရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူး…
ကျွန်တော့်တို့ စုတ်ချက်တွေ ၀ိဥာဉ်ရှိသ၍ ခြယ်မှုန်းနေကြအုံးမှာပါပဲ….
စကားလုံးပန်းချီတွေ ဟောဒီ့ရှေ့မှာ သွန်မှောက်ချပြနေအုံးမှာပါပဲ…
တခါတရံ ကာရံညီချင်ညီမယ်…၊ တခါတရံ သံစဉ်မဲ့နေမယ်..
တခါတရံလဲ ထော်လော်ကန့်လန့် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ်….
အားပေးသူရှိချင်ရှိမယ်….၊ ရှိချင်မှလဲ ရှိမယ်…..
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ဘလော့တခု ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်….
ဒါပေမယ့် ဘလော့ဂါ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်…..
ကျွန်တော့် မှာ ဘလော့တခုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
(၂၀၀၈ခုနှစ် MBS Seminar အတွက် ဘလော့ဂါအများ ပေါင်းစပ်ရေးသားသည်။)
Filed under MBS |	Leaveacomment
Miss People 2007’s Features
ခုတစ်လော လက်ချောင်းလေးတွေ ကိုက်နေတယ်.။ စာလည်းအကြာကြီး မရိုက်နိုင်ဘူး။ ပိုစ့်လည်း မတင်နိုင်သေးဘူး။ လောလောဆယ်တော့ 2007 ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ People Magazine ရဲ့ Miss People 2007 Style Competition ရဲ့ Video Clip လေး တင်ပေးလိုက်တယ်။ လက်ကိုက်သက်သာတော့မှပဲ ပိုစ့်တွေ ပြန်တင်တော့မယ်။
Posted on August 27, 2008 by cuttiepinkgold
၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၁ ရက်နေ့ မြန်မာအင်ဖိုတက် အဆောက်အဦးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော Socializtion on Net နည်း ပညာဟောပြောပွဲအား မူလစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ကျင်းပရန် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။
အထက်ပါအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သော ထင်မြင်ချက်၊ သတင်းနှင့် အခြား အကြောင်းအရာ များအား ပွဲဖြစ်မြောက်ရန် စီစဉ် သူများ အနေနှင့် မည်သည့်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်မျှ ပြုလုပ်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပါ။ Seminar နှင့် ပတ်သက်သော အပြောင်းအလဲသတင်း အချက်အလက်များ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ တရားဝင် ပြောဆိုချက်များ ကို ပွဲဖြစ် မြောက်ရေး စီစဉ်သူများ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘလောက်များတွင် ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီစဉ်သူများ၏ ဘလောက်များတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည်သာ တရားဝင် ပြောဆိုချက်များ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခြားသော ထင်မြင်ပြောဆိုချက်များကို ပွဲစီစဉ်သူများမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းသွားနိုင်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း သိစေလိုပါသည်။
Seminar Organized by Bloggers
Posted on August 21, 2008 by cuttiepinkgold
သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မည် World Blog Day အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် MBS (Myanmar Blogger Society) အဖွဲ့ဝင် Blogger တွေ ဦးစီးပြုလုပ်မယ့် Seminar တစ်ရပ်ကို 2008 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့ MICT မှာ နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Seminar အမည်ကိုတော့ “Socialization on Net” လို့အမည်ပေးထားပြီး မြန်မာ Blogger များရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Seminar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို ပြည်တွင်းမြန်မာဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှု၊ ပြည်ပမြန်မာ ဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့ဖြင့် စည်းစည်းလုံးလုံး ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Social Networking နဲ့ Blogging တို့ကို အခြေခံပြီး အများအကျိုး၊ နိုင်ငံ့အကျိုး သယ်ပိုးနိုင်တာတွေ၊ စီးပွားရေး ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နိုင်တာတွေ၊ ပညာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တာတွေ၊ Global ရေစီးကို ပိုမိုလျင်မြန်အောင် စီးဆင်းနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေကို မြန်မာ ဘလောဂ့်ဂါ လူငယ်များမှ ဟောပြောပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MBS ရဲ့ အနာဂတ် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပါ ပြောကြားပေးမှာ ဖြစ်ပြီး Guest Speaker တစ်ဦးကိုလည်း ဖိတ်ကြားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်ရှင်။
ဒီ စီမီနာ အခမ်းအနားလေးကို အိုင်တီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အစရှိတဲ့ နယ်ပယ် အသီးသီးကလူတိုင်းအတွက် ရည်ရွယ် ဟောပြောပေးမှာ ဖြစ်လို့ လူတိုင်း မလွတ်တမ်း လာရောက်နားထောင်သင့်တဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Social Networking နဲ့ Blogging တို့မှ ရရှိလာမယ့်၊ ဖန်တီးယူနိုင်တဲ့ အခွမ်းအလမ်းတွေဟာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ အဲဒီနေ့မှာပဲ လာရောက်နားထောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Filed under MBS |	5 Comments
Posted on August 11, 2008 by cuttiepinkgold
Marketing ဆိုတာ ဘာလဲ။ မားကတ်တင်းနည်းလမ်း ၉မျိုးကို အခုလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဥပမာလေးတွေနဲ့ သင်ထားတာ ကောင်းတယ်။ မမေ့နိုင်တော့ဘူး။
A Professor at one of the IIM’s was explaining marketing concepts to the Students:
1. You seeagorgeous girl ataparty. You go up to her and say: “I am very rich. Marry me!” – That’s “Direct Marketing.”
2. You’re ataparty withabunch of friends and seeagorgeous girl. One of your friends goes up to her and pointing at you says: “He’s very rich. Marry him.” -That’s “Advertising.”
3. You seeagorgeous girl ataparty. You go up to her and get her telephone number. The next day, you call and say: “Hi, I’m very rich. Marry me.” – That’s “Telemarketing.”
4. You’re ataparty and see gorgeous girl. You get up and straighten your tie, you walk up to her and pour heradrink, you open the door (of the car)for her, pick up her bag after she drops it, offer heraride and then say:”By the way, I’m rich. Will you Marry Me?” – That’s “Public Relations.”
5. You’re ataparty and see gorgeous girl. She walks up to you and says:”You are very rich! Can you marry me?” – That’s “Brand Recognition.”
6. You seeagorgeous girl ataparty. You go up to her and say: “I am very rich. Marry me!” She gives youanice hard slap on your face. – That’s “Customer Feedback.”
7. You seeagorgeous girl ataparty. You go up to her and say: “I am very rich. Marry me!” And she introduces you to her husband. – That’s “Demand and Supply Gap.”
8. You seeagorgeous girl ataparty. You go up to her and before you say anything, another person come and tell her: “I’m rich. Will you marry me?” And she goes with him – That’s “Competition Eating into your Market Share.”
9. You seeagorgeous girl ataparty. You go up to her and before you say: “I’m rich, Marry me!” your wife arrives. – That’s “Restriction for Entering New Markets.”
The Thing that Keeps Me Busy!
Posted on August 7, 2008 by cuttiepinkgold
ပင့်ဂိုလ်းတို့များ တွေ့လိုက်ရင် ညည်းနေတာချည်းပဲ အလုပ်များတယ် အလုပ်များတယ်နဲ့ လို့ မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။ အလုပ်မများလို့လည်း မရဘူးလေ.. လာတော့မယ် အရေးကြီး ကိစ္စက… ဒီမှာ ကျွန်မကို အလုပ်များစေတဲ့ အရာ..
စပွန်စာတွေ ရှာရတယ် (သိန်း ၂၅၀ တဲ့… ရှိရင်ပေးကြပါ)
ခရီး ခဏ ခဏ သွားရတယ်
ဒီဇိုင်နာနဲ့ နပန်းသတ်နေရတယ် (ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ ရအောင်)
နောက်ထပ် ပြောပြလို့ မရပေမယ့် ဘာတွေများနေမှန်း မသိအောင် များနေတဲ့ အလုပ်တွေ အများကြီးပဲ..
သတင်းတွေလည်း ၀ိုင်းဖြန့်ပေးကြပါ အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ http://www.people.com.mm/mispeople2008 ဆိုပြီး တင်ဖို့ ရှိပါတယ်..
Filed under Announcement |	4 Comments
Advantages of Nargis!
နာဂစ်အကြောင်းကတော့ ခုချိန်ထိကို ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ကို ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ကျွန်မ ညီမလေး တစ်ယောက် ပြောသလိုပေါ့.. နာဂစ် များမဖြစ်ရင် သတင်းစာတွေ ဘာကိုများ ရေးကြမလဲ မသိဘူးနော် တဲ့ :)။ ဟုတ်ပါတယ် နာဂစ် စဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေ ခုထိ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ထောက်ပံ့ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စတဲ့သတင်းတွေဟာ သတင်းစာမျက်နှာတိုင်းရဲ့ နေရာတော်တော်များများမှာ ပါဝင်နေတယ် မဟုတ်လား။ နာဂစ်ရဲ့ ဒုက္ခတွေကို ရေးကြသလို နာဂစ်ကြောင့် ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ပရဟိတ အကြောင်းတွေလည်း ဖော်ကြူးကြပါတယ်။ နာဂစ်က တော်တော်ဆိုးပေမယ့် အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲနေတတ်တဲ့ သဘောအတိုင်း နာဂစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေကို တစ်ချက်တွေးကြည့်မိပါတယ်။
(၁) ပရဟိတ စိတ်များ ထွန်းကားလာခြင်း
နာဂစ်ဟာ ဒီနေ့ခေတ် မြန်မာ လူငယ်တော်တော်များများရဲ့ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ လူမှုဝန်ထမ်း ပရဟိတ စိတ်ကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူငယ် လူရွယ်တွေကို တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အရေး အရင်တုန်းကဆို လူကြီးတွေက နားမနည်းဝင်အောင် ပြောကြရပါတယ်။ အဲ.. နာဂစ်လည်း ဖြစ်ရော လူငယ်တိုင်းဟာ ကိုယ့်အသိ၊ ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လှုပ်ရှား လာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အရင်တုန်းက ကာရာအိုကေဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင် စသောနေရာများမှာ ပျော်ပါး အချိန်ကုန်နေတဲ့ သူတွေတောင် နာဂစ်နဲ့ ပတ်သက်လာရာ အချိန်မရွေးကူညီဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတာဟာ အားရစရာကောင်းတဲ့ အချက်ကလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားချင်း စာနာစိတ်တွေ၊ အခက်အခဲကို ထိုင်ကြည့်မနေတတ်တဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ ချိးကျူး ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းလှပါတယ်ရှင်။
(၂) နေရာ ဒေသအလိုက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း
နာဂစ်လည်းဖြစ်ရော နိုင်ငံတကာ NGO, UN စသောအဖွဲ့များဟာ တာဝန်အရ လေဘေးသင့်ဒေသတွေကို သွားရောက်ကူညီကြရသလို၊ အခြား လတ်တလော ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များလည်း ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေကို ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြဖို့၊ လေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ လူငယ်တော်တော်များများကို အလုပ်ခေါ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ volunteer အဖြစ်နဲ့ပဲ ခေါ်ကြပေမယ့်၊ တစ်ချို့တွေကတော့ လုပ်ခလစာတွေလည်း များများလေး ပေးတာရှိပါတယ်။ ဒေသခံလူငယ်တွေရော၊ ဒေသခံမဟုတ်တဲ့ လူငယ်တွေရော ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရင်းကနေ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိလာပါတယ်။
(၃) သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုထိမ်းသိမ်း လိုကြခြင်း
နာဂစ် ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ….သစ်တော သစ်ပင်တွေ ပြုန်းတီးပြီး ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်လို့ပဲ နားလည်မိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ လေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာရော လေဘေးမသင့်ဒေသတွေမှာပါ လေကာပင်တွေ၊ သစ်ပင်တွေ ပိုမိုစိုက်ပျိုးလာကြပါတယ်။ လေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာလည်း မိုးဒဏ်၊ လေဒဏ် ခံနိုင်တဲ့ အဆောက်အဦးတွေ တည်ဆောက်လာကြပါတယ်။ ဖြစ်ပြီးမှ လုပ်တာ မှန်ပေမယ့် ဒါဟာလည်း ကောင်းတဲ့အချက်ပဲ မဟုတ်လားရှင်။
(၄) နဂိုရှိရင်းစွဲ လမ်းပေါ်နေလူများ အိမ်ယာများ ရလာခြင်း
တစ်ချို့လူတွေဟာ နာဂစ်ကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ အစကတည်းက ဖြစ်သလိုနေ၊ ဖြစ်သလိုစား၊ ကြုံရာအိပ်နေတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စော်ကားပြောဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်မရှိ ယာမရှိတွေလည်း ရှိနေကြတတ်ပါသေးတယ်။ နာဂစ်လည်းဖြစ်ရော သူတို့တွေက ပျော်တယ်လို့တောင် ပြောပါသတဲ့။ နာဂစ်ကြောင့် အလှူရှင်တွေ နေ့တိုင်းလာတော့ မပူမပင်စားရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးရှိကြဟန် တူပါတယ်။ ခုတော့ လေဘေးသင့်ဒေသမှာ အိမ်တွေလည်းဆောက်ပေးတော့ သူတို့တွေ အိမ်တွေရလာကြတယ်။ စားဖို့သောက်ဖို့ အရင်ကလောက် ပူပင်ကြရတာမျိုး မရှိတော့ဘူး… ဒါဟာလည်း ပြောရရင် သူတို့တွေအတွက် အကျိုးကျေးဇူးပဲရှင့်
(၅) တစ်ချို့ကုန်သည်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ပိုမိုဝင်ငွေကောင်းလာခြင်း
အဓိကကတော့ ဆန်ကုန်သည်တွေ၊ အိမ်မိုးသွပ်ပြားရောင်းတဲ့သူတွေ၊ တာလာပတ်ရောင်းတဲ့ သူတွေပေါ့။ တစ်ချို့တွေဆို ဈေးတောင်ပိုတင်လိုက်ကြပါသေးတယ်။ အမြတ်အစွန်းလည်း ပိုမိုရရှိကြတာကြောင့် စီးပွားဖြစ် တွက်ချေကိုက်ပါတယ်ရှင်။ နာဂစ်ဟာ တစ်ချို့ကို ဆင်းရဲမွဲတေစေသလို၊ တစ်ချို့ကို ချမ်းသာသည်ထက်မက ချမ်းသာစေပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဒေသတွင် စားသောက်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်တွေ ပိုပြီးရောင်းအားကောင်းပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေး ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုရောက်ကြပြီး သူတို့တွေဟာ ညဘက်တိုင်းမှာ စားသောက်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်တွေမှာ ညစာသုံးဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲတော့ သူတို့တွေ ရောင်းအားပိုတက်ပြီး ပိုမိုစီးပွား ဖြစ်ထွန်းကြပါတယ်။
ကျွန်မပြောချင်တာ တစ်ချက်၊ နှစ်ချက်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဓိက ကတော့ နာဂစ်ကြောင့် ဆိုးကျိုးချည်းပဲ ဖြစ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့နေရာမှာ၊ တစ်ချို့လူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးကို သယ်ဆောင်ပေးတာလည်း ဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
Filed under Random Thoughts |	5 Comments